Ukuncishiswa kwezimoto kwehlisa ukushisa kwegiya Kwemoto ngesigaba esisodwa
Isithuthi sokunciphisa umshini wegiya wokunciphisa motor isigaba esisodwa
Thola umugqa ogcwele weGear kupunguza Motors kusuka kwaSogears
Izinketho ezahlukene ze-110 volt ac gear motor single isigaba motor gearbox.
Sinikezela ngokunemba okuphezulu kwe-inline gear reducers ngenani eliphakeme.Funda ngokusebenza kwezimoto zokunciphisa igiya.Izinhlobo ezahlukahlukene ze-110 volt ac gear motor single phase motor gearbox options. ama-ac motors wokunciphisa igiya kagesi, i-torque ephezulu yokunciphisa izimoto, ngisho nama-volt we-volt we-volts we-12, ibhokisi lokunciphisa i-motor motor, ama-dc motors ngokuncishiswa kwamagiya, ama-Industrial Gearboxes & Reducers Speed ​​athengiswayo, Thola amadili amahle kakhulu, kubhekisa kumagiya ahlukene aguqukayo isivinini noma i-torque yemoto.
Isithuthi esinciphisa isivinini segiya
Sinikeza ngemikhiqizo ephezulu, yemikhiqizo ephansi. Izinketho eziningi zezimoto zamagiya. Imoto enciphisa amagiya ingaphindaphindeka nethoshi lokukhishwa kwemoto.
AC Parallel Shaft Isigaba Esithathu Sesigaba Segiya
Sinikela ngeMoto yokuNciphisa ijubane eyi-12V, isivinini sokuhamba semoto esezingeni eliphakeme emhlabeni wonke njalonjalo. I-AC Parallel Shaft Izigaba ezintathu zeGiya Motor 155 RPM.
Sikulungele futhi sibheke phambili ekubambisaneni kwethu. IHelical-Worm Gear Reducer engile yegiya motor rotisserie. IGreartisan DC 12V 100RPM Gear Motor. I-1/4 hp 230V Imodeli yesiGaba Esithathu 4ZJ55.Kukhona futhi ukukhetha okuhle kwamaMotor DC. Lezi zivame ukusetshenziswa kwizicelo zezimoto kufaka phakathi ama-win winches emalolini, ama-motorhield wiper motors, izihlalo zamandla namawindi wamandla.
Njengomkhiqizi wezimoto ezinciphisa igiya, sihlinzeka ngama-gearmotor e-DC adinga umthombo wamandla webhethri futhi asetshenziselwa izinhlelo ezinesivinini esiqondile ezinjengezihlalo ezinamasondo, imibhede yasesibhedlela, amalifti namatafula ezokwelapha, izihlalo zamandla, nokunye. Kusuka Kulolu chungechunge lwegiya elincane elincane elinamandla emoto angama-40W-15.5kW. kufana ne-Parallel-axis type helical gear reducer ngomthamo wemoto ongu-0.1kW-45kW.
Uma unemikhiqizo oyithandayo, woza uxhumane nathi! Sikulungele futhi sibheke phambili ekubambisaneni kwethu.Senza ama-gear reducers ukwandisa i-torque nokunciphisa isivinini sokulayisha sama-motors kagesi.Uma unemibuzo, ungaxhumana nathi, sizojabula ukukusiza!